Wadarta Dagaalka: ROME REMASTERED patch 2.0.2 ayaa la heli karaa | Waxaan ka imid mac
Wadarta Dagaalka: ROME REMASTERED patch 2.0.2 ayaa la heli karaa
Ciyaaraha taxanaha ah ee Dagaalku waxay sii daayaan balastar cusub oo loogu talagalay Wadarta Dagaal: ROME REMASTERED. Xaaladdan oo kale waa 2.0.2 waxaana loo heli karaa adeegsadayaasha Mac iyo sidoo kale adeegsadayaasha Linux. Ciyaarta caanka ah waxay heshaa nooc cusub oo astaamo cusub oo xiiso leh laga hirgaliyay. Xaaladdan oo kale, bilowgii Juun, nooc leh balastar 2.0.1 ayaa loo sii daayay ciyaartan oo hadda waa la heli karaa nooc cusub oo hadda la soo dejisan karo laguna rakibi karo kombiyuutarada.
Patch 2.0.2 ayaa keena horumarin la taaban karo oo ku sameeyay is -dhexgalka isticmaalaha oo ay weheliso isbeddello ku yimid garaadka macmalka ah, hagaajinta goobta iyo maqalka, oo lagu daray horumarin kale oo dheeri ah.
Imaanshaha qaabkan cusub ee ciyaarta ayaa lagu dhawaaqay dhowr bilood ka hor oo hadda dhammaan kuwii sugayay ama horeyba u haystay boos celinta ayaa bilaabi kara cusboonaysiintaan. Waa cusboonaysiin leh horumarin badan oo laga yaabo inay xiiso u yeeshaan taageerayaasha sheekada Total War.
Sida lagu sharaxay Feral, cusbooneysiintan ugu horeysa waxay diirada saareysaa xasiloonida guud ee ciyaarta iyo saameynta firidhsan ee dhulka hoostiisa ayaa sidoo kale loo hirgaliyay cutubyo ka tirsan dagaalada waqtiga-dhabta ah. Balastar-kan cusub ayaa intaa ku daraya liis aad u tiro badan oo leh hagaajin weyn dhammaantoodna waxaan si toos ah uga dhex akhrin karnaa Wadarta barta dagaalka. Wadarta Dagaalka: ROME REMAStered ayaa hadda loo heli karaa in lagu soo dejiyo labadiinaba adigu Websaydhka Feral ama mashiinka ciyaarta uumiga oo leh: 24.99 rodol / 29.99 dollar / 29,99 euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Ciyaaraha » Wadarta Dagaalka: ROME REMASTERED patch 2.0.2 ayaa la heli karaa
Apple Find My‌ goor dhow ayaa loo heli karaa ‌AirPods Pro‌ iyo ‌AirPods Max‌
Xiriirrada Apple ee Kuuriyada Koonfureed ee loogu talagalay Baabuurka Apple